Muuqaalka labaad ee taxanaha SEE oo hadda la heli karo | Waxaan ka imid mac
Bishii Juun ee la soo dhaafay, Apple ayaa siidaysay cajaladdii ugu horreysay ee gaariga taxanaha xilli labaad oo uu jilayo Jason Momoa SEE, taxane ah oo sida ay sheegtay warbaahinta kala duwan, shirkadda fadhigeedu yahay Cupertino ay doonaysay inay yeelato isaga Game of Thrones, si kastaba ha ahaatee, waxay lahayd soo dhaweyn aad u qabow oo ka timid dhaleeceeyayaasha iyo dadka isticmaala.
Xilligan labaad ee SEE waa waxaa jilaya Jason Momoa, Dave Bautista, iyo Alfre Woodard. Waa fulin ay soo saartay Steven Knight, Francis Lawrence, Peter Chernin, Jenno Topping, Jim Rowe iyo Jonathan Tropper, oo sidoo kale u adeega showrunner. Taxanaha waxaa soo saaray Chernin Entertainment iyo Endeavor Content.
Qeexitaanka trailer -kan labaad, waxaan ka akhrisan karnaa:
Xilligii labaad, Baba Voss (Jason Momoa) wuxuu ku dhibtoonayaa inuu mideeyo qoyskiisa. Walaalkiis Edo (Dave Bautista) ayaa qabtay gabadhii Baba Haniwa waxayna ku dhaaratay aargoosi walaalkeed. Dhanka kale, hanjabaadda dagaalku waxay ku habsatay Boqortooyadii Paya iyo Jamhuuriyadda Trivantia, iyagoo Baba iyo qoyskiisa si toos ah ugu soo jiidaya bartamaha colaadda.
Haddii aad jeceshahay xilli -ciyaareedkii koowaad, oo aad sugeyso horudhaca labaad, waxaa ka harsan wax ka yar hal bil, tan xigta August 27 taariikhda ay Apple u dooratay inay soo bandhigto qaybta koowaad ee xilli -ciyaareedka labaad ee taxanahan.
Waqtiga kama dambaysta ah wuxuu sheegay in Apple ay cusbooneysiisay taxanahan xilli seddexaad isla markaana duubista ay durba ka socoto Kanada. Sida muuqata, tallaabadan oo u muuqata mid looga gol leeyahay in lagu yareeyo kharashaadka, ayay shirkadda wax soo saarku go'aansatay wada toogtaan xilli -ciyaareedyada labaad iyo saddexaad Sidan, kuma sugi doonno sannad si aan ugu raaxaysanno xilli -ciyaareedka saddexaad.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Tilmaanlaha labaad ee taxanaha SEE oo hadda la heli karo
Titanium Apple Watch lama heli karo: Mala -awaalku wuu furmay